Liiska Geekbench ee Samsung Galaxy A70s ayaa soo ifbaxday | Androidsis
Samsung ayaa dhawaan ka daah fureysa dhowr taleefan oo casri ah oo ka mid ah aaladda Galaxy A. Shirkaddu aad ayey ugu faraxsan tahay qoyskan, iyo sidoo kale Taxanaha Galaxy M. Xaqiiqdii, caddaynta tan ayaa ahayd aaladaha horeyba loo diiwaan geliyey kan ugu horreeya sannadka 2020 -taasoo noo sheegaysa inay jiraan kuwo badan oo aan heli doonno sanadka soo socda, marka lagu daro kuwa wali la sii deyn doono inta ka hartay tan- iyo dillaacyada dhowr terminal oo labadaba ah.
Geekbench had iyo jeer waa mid ka mid ah jaangooyooyinkii ugu firfircoonaa, illaa inta xogaha laga hadlayo. Jaangooyada, iyada oo loo marayo barxaddeeda tijaabada, waxaa lagu gartaa inay tahay mid ka mid ah kuwa ugu horreeya ee leh terminaal ka hor kuwa kale oo badan, xitaa ka hor intaan la bilaabin. Galaxy A70s ayaa ka mid ah kuwan, iyo, iyada oo ay ugu wacan tahay liiska isku midka ah ee dhowaan lagu muujiyay keydka xogta aasaasiga ah, waxaan horeyba u heli karnaa fikrado adag oo adag oo ah waxa na haysta.
Sida ku cad waxa Geekbench uu ku faahfaahiyay keydkiisa, Samsung Galaxy A70s -smartphone oo loogu magac daray 'samsung SM-A707F' halkaas- wuxuu adeegsadaa nidaamka hawlgalka ee Android Pie, kaas oo lagu habeyn lahaa lakabka shirkadda ee 'One UI'. Tani waxay la imaan doontaa astaamo ka wanaagsan kuwa Galaxy A70 asalka ah
Samsung Galaxy A70s ayaa ku dusay Geekbench
Xog kale oo ay soo bandhigtay bartilmaameedku waxay la xiriirtaa barmaamijka moobiilka ee uu ku martigelin doono caloosha. Gaar ah, SoC ee ku qoran liistada ayaa ah Sapdragon 675, mid ka mid ah Chipsets-ka cusub ee 'Qualcomm' kaas oo gaari kara inta jeer ee ugu badan ee shaqada 2 GHz.
Samsung Galaxy A70 waxay heleysaa kamarada habeenkii ee Galaxy S10 cusbooneysiinteeda cusub
Dhinaca kale, Galaxy A70s ayaa la muuqday 6 GB RAM iyo u suurtagashay in ay dhaliso qiyaastii 2,365 dhibcood imtixaannada hal-abuurka ah iyo 6,372 ee imtixaannada isku-xidhka badan. Tirooyinkani waxay siinayaan kala-duwanaanta u dhexeeya, gacmaha hoos. Dhawaan waxaan xaqiijin doonaa dhammaan tilmaamahan moobiilka, in kastoo aynaan ogeyn goorta, maxaa yeelay waxba lagama oga taariikhda ay bilaabeyso iyo inay suuqa ka jirto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Liiska Geekbench ee Samsung Galaxy A70s ayaa soo ifbaxday